Otú e si kee eluigwe na ụwa (1, 2)
Ụbọchị isii e ji kee ụwa (3-31)
Ụbọchị nke 1: ìhè; ehihie na abalị (3-5)
Ụbọchị nke 2: mbara (6-8)
Ụbọchị nke 3: ala nkịtị na ahịhịa ndụ (9-13)
Ụbọchị nke 4: ihe ndị na-enye ìhè (14-19)
Ụbọchị nke 5: azụ̀ na nnụnụ (20-23)
Ụbọchị nke 6: anụmanụ na mmadụ (24-31)
1 Ná mmalite, Chineke kere eluigwe na ụwa.+ 2 E nweghị ihe dị n’ụwa. Ọ tọgbọ chakoo. Ọchịchịrị gbara n’elu ogbu mmiri,*+ ike Chineke*+ nọkwa na-erugharị n’elu mmiri ahụ.+ 3 Chineke wee sị: “Ka ìhè dị.” Ìhè wee dị.+ 4 Mgbe e mechara, Chineke hụrụ na ìhè ahụ dị mma. Chineke wee malite ịkpa ókè n’etiti ìhè na ọchịchịrị. 5 Chineke kpọrọ ìhè ahụ Ehihie, ma ọ kpọrọ ọchịchịrị ahụ Abalị.+ E wee nwee mgbede, nweekwa ụtụtụ, ya abụrụ ụbọchị nke mbụ. 6 Chineke wee sị: “Ka e nwee mbara+ n’agbata mmiri ahụ, ka e kewaakwa mmiri ahụ ụzọ abụọ.”*+ 7 Chineke wee mee ka e nwee mbara ma kewaa mmiri ahụ. O mere ka e nwee mmiri nke ga-adị n’okpuru mbara ahụ na mmiri nke ga-adị n’elu mbara ahụ.+ O wee dị otú ahụ. 8 Chineke kpọrọ mbara ahụ Eluigwe.* E wee nwee mgbede, nweekwa ụtụtụ, ya abụrụ ụbọchị nke abụọ. 9 Chineke wee sị: “Ka mmiri ahụ dị n’ụwa* sọkọta otu ebe, ka ala nkịtị pụtakwa.”+ O wee dị otú ahụ. 10 Chineke kpọrọ ala nkịtị ahụ Ala.+ Ma ọ kpọrọ mmiri ahụ sọkọtara ọnụ Oké Osimiri.+ Chineke wee hụ na ha dị mma.+ 11 Chineke sịziri: “Ka ala puo ahịhịa na obere osisi ndị na-amị mkpụrụ nakwa nnukwu osisi ndị na-amị mkpụrụ n’ụdị ha dị iche iche, bụ́ ndị na-enwe mkpụrụ n’ime ha.” O wee dị otú ahụ. 12 Ala wee malite ipu ahịhịa, obere osisi ndị na-amị mkpụrụ+ nakwa nnukwu osisi ndị na-amị mkpụrụ n’ụdị ha dị iche iche, bụ́ ndị na-enwe mkpụrụ n’ime ha. Chineke wee hụ na ha dị mma. 13 E wee nwee mgbede, nweekwa ụtụtụ, ya abụrụ ụbọchị nke atọ. 14 Chineke wee sị: “Ka e nwee ihe ndị na-enye ìhè+ na mbara eluigwe iji kpaa ókè n’etiti ehihie na abalị.+ Ha ga-abụ ihe a ga-eji na-amata oge na ụbọchị na afọ.+ 15 Ha ga-abụ ihe ndị na-enye ìhè, ndị ga-adị na mbara eluigwe iji na-enye ìhè n’ụwa.” O wee dị otú ahụ. 16 Chineke wee kee nnukwu ihe abụọ na-enye ìhè. O mere ka nke ukwu na-enye ìhè n’ehihie,+ mee ka nke nta na-enye ìhè n’abalị. O kekwara kpakpando dị iche iche.+ 17 Chineke wee dowe ha na mbara eluigwe ka ha na-enye ìhè n’ụwa, 18 ka ha na-achị ehihie na abalị ma na-akpa ókè n’etiti ìhè na ọchịchịrị.+ Chineke wee hụ na ha dị mma. 19 E wee nwee mgbede, nweekwa ụtụtụ, ya abụrụ ụbọchị nke anọ. 20 Chineke wee sị: “Ka anụ dị iche iche* ju ná mmiri. Ka anụ ndị na-efe efe na-efegharịkwa n’ụwa, na mbara eluigwe.”*+ 21 Chineke kere nnukwu anụ mmiri dị iche iche na anụ niile* na-agagharị n’ime mmiri n’ụdị ha dị iche iche nakwa anụ ọ bụla na-efe efe nwere nku, n’ụdị ya dị iche iche. Chineke wee hụ na ha dị mma. 22 Chineke wee gọzie ha, sị: “Mụọnụ ọmụmụ, baanụ ụba, jukwanụ n’oké osimiri.+ Ka anụ ndị na-efe efe dị ọtụtụ n’ụwa.” 23 E wee nwee mgbede, nweekwa ụtụtụ, ya abụrụ ụbọchị nke ise. 24 Chineke wee sị: “Ka anụ dị iche iche* dịrị n’ala n’ụdị ha dị iche iche, anụ ụlọ na anụ ndị na-arị arị* na anụ ọhịa n’ụdị ha dị iche iche.”+ O wee dị otú ahụ. 25 Chineke wee kee anụ ọhịa n’ụdị ha dị iche iche na anụ ụlọ n’ụdị ha dị iche iche nakwa anụ niile na-arị arị n’ụdị ha dị iche iche. Chineke wee hụ na ha dị mma. 26 Chineke wee sị: “Ka anyị+ kee mmadụ n’oyiyi anyị,+ ka ha dị ka anyị.+ Ka azụ̀ ndị juru n’oké osimiri na anụ ndị na-efegharị n’eluigwe na anụ ụlọ na anụ niile na-arị arị nọrọ n’okpuru ha, ka ha na-elekọtakwa ụwa niile.”+ 27 Chineke wee kee mmadụ n’oyiyi ya. Chineke kere ha ka ha yie ya. O kere ha nwoke na nwaanyị.+ 28 Chineke gọziri ha. Chineke sịkwara ha: “Mụọnụ ọmụmụ, baanụ ụba, junụ n’ụwa,+ na-elekọtakwanụ ya.+ Ka azụ̀ ndị juru n’oké osimiri na anụ ndị na-efegharị n’eluigwe na ihe ọ bụla e kere eke dị ndụ nke na-agagharị n’ala nọrọ n’okpuru unu.”+ 29 Chineke wee sị: “Lee, enyela m unu obere osisi niile na-amị mkpụrụ bụ́ ndị dị n’ebe niile n’ụwa nakwa nnukwu osisi ọ bụla na-amị mkpụrụ. Ha ga-abụ nri unu.+ 30 Ma, enyela m anụ ọhịa ọ bụla nọ n’ụwa na anụ ọ bụla na-efegharị n’eluigwe na ihe ọ bụla dị ndụ* na-agagharị n’ụwa ahịhịa ndụ niile ka ha bụrụ nri ha.”+ O wee dị otú ahụ. 31 Mgbe e mechara, Chineke lere ihe niile o kere wee hụ na ha dị nnọọ mma.+ E wee nwee mgbede, nweekwa ụtụtụ, ya abụrụ ụbọchị nke isii.
^ Ma ọ bụ “mmiri na-asọ asọ.”
^ Ma ọ bụ “mmụọ nsọ Chineke.”
^ Ya bụ, ka a kpaa ókè n’etiti mmiri dị n’elu na mmiri dị n’ụwa.
^ Ma ọ bụ “Mbara Igwe.”
^ Ma ọ bụ “mkpụrụ obi dị iche iche dị ndụ.”
^ Ma ọ bụ “mkpụrụ obi niile dị ndụ.”
^ Ma ọ bụ “anụ ndị na-akpụ akpụ.” Anụ ndị dị ka agwọ, òké, na ụmụ ahụhụ nwere ike iso na ha.
^ Ma ọ bụ “mkpụrụ obi ọ bụla dị ndụ.”